1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe iWCED) linolwazi lokuba abafundi abaninzi kwizikolo ezifundisa izifundo zobugcisa kwi-Further Education and Training band bazikhetha izifundo ukwenzela iBakala 10 ngo-2016, into ethetha ukuba abayithobelanga imimiselo ye-Circular S6 ka-2016. Le setyhula izicacisa ngokuthe gca iimfuno ezimiselweyo zokukhetha izifundo zecandelo lobugcisa (technical stream).
2. Le meko ibangelwe kukuba kubonelelwe emva kwexesha ngeemfuno ezimiselweyo zokuqaliswa kwezifundo zobugcisa zeTechnical CAPS. Lo gama iGazethi kaRhulumente 39435, emalunga nezifundo ezivunyiweyo kwicandelo lezifundo zobugcisa (technical stream), yapapashwa ngowe-20 Novemba 2015, i-Circular S15 ka-2015, yomhla we-14 Disemba 2015 esihloko sithi "Promulgation of Amendment to Policy and Regulations Pertaining to the National Curriculum Statement Grades R-12", yathunyelwa kumaphondo emva kokuba izikolo zivaliwe.
3. Ngethuba lokufika kwe-Circular S15 ezikolweni eNtshona Koloni, zazisele izikolo zizigqibile izicwangciso zazo zokulungiselela u-2016.
4. ISebe iWCED lawuphakamisa lo mba kwiSebe leMfundo esiSiseko (ISebe iDBE), lacela ukuba kwenziwe umnyinyiva (a concession) ukulungiselela abafundi beli qela (cohort of learners) (likhankanywe kumhlathi 1), wokuba bavunyelwe baqhubeke nephakheji yabo yezifundo abazikhethileyo de babe kwiBakala 12 yaye bafumane neziphumo zeemviwo zabo.
1. ISebe iWCED ngokwenjenje linika imvume izikolo zecandelo lezifundo zobugcisa ezingayithobelanga imimiselo ye-Circular S6 ka-2016, ziqhubeke nephakheji yezifundo ezizikhethileyo kwiBakala 11 ngo-2017 nakwiBakala 12 ngo-2018.
2. Abafundi ababhalisela izifundo zecandelo lobugcisa (technical subject stream) kwiBakala 10 ngo-2017 mabazithobele iimfuno ezimiselweyo ezicaciswe kwi-Circular S6 ka-2016.
"Government Gazette No. 39435" (ubukhulu: 4 550 KB)